Kisendrasendra no nampalaza an-dry Bruce Willis, Will Smith…
Ry Brad Pitt, Victoria Beckham, Papa Jean Paul II sy ny « rolex »
Misy fehezan-teny nampiasain’ilay mpanao dokambarotra, Jacques Séguéla, izay milaza fa raha tsy mbola manana « Rolex »
Misy fehezan-teny nampiasain’ilay mpanao dokambarotra, Jacques Séguéla, izay milaza fa raha tsy mbola manana « Rolex » eo amin’ny faha-50 taona dia toa ireny tsy nahomby ireny teo amin’ny fiainana.
Adèle sy Jennifer Lawrence : « Nanal’azy » tanteraka
Faran’ny herinandro tao anatin’ny fialana voly tanteraka ny an’ilay mpihira, Adèle sy ilay mpilalao sarimihetsika Jennifer Lawrence.
Mpiandry manokan’ireo olo-malaza : “sady taviny no volony” araka ilay fiteny
Manana mpiandry manokana avokoa ireo olo-malaza noho izy ireo be mpanaraka ary indraindray dia maratra mihitsy vokatry ny fifanosehan’ireo mpankafy na ny herisetra ataon’ireto farany.
1. Tao anaty fandaharana maraina amina fahitalavitra frantsay iray no nametra-panontaniana ilay mpanentana Matthieu Delormeau.
Raha toa ka azo sary miaraka amina vehivavy hafa ankoatra an’i Brigitte Macron dia mety ohatrinona no ho saran’izany?
Mitentina 185 tapitrisa dolara: Lovan’ilay sakan’i Karl Lagerfeld
Taorian’ny nahafatesan’ity mpamorona teratany alemana Karl Lagerfeld ity dia naha be resaka ny lova izay napetrany ho an’ilay sakany, “choupette”.
Ireo zanak’olo-malaza andrasana fatratra amin’ity taona 2019 ity
Isan’ireo zaza nandrasana tamin’iny taona 2018 iny ny zanak’i Eva Longoria izay niteraka voalohany teo amin’ny faha-43 taonany.
Misy ireo olo-malaza no toy ny efa voalahatra hiditra eo amin’ny sehatra iray izay misy azy, hatrany am-boalohany.
Ny an’ireto entina aminao ireto kosa anefa dia kisendrasendra no nahatonga azy ireo hanao ny asa tena nampalaza azy. Azo lazaina ho vintana ihany koa anefa…
1. Fony kely i Bruce Willis dia niakanakam-piteny. Nanao teatra izy mba hanalàna izany ary dia izao lasa mpilalao sarimihetsika malaza izao
2. Mpandrafitra i Harrisson Ford taloha. Nanolo hidim-baravarana tany amin’ireny toerana fanodinana horonan-tsary ireny no asany, fa liana tamin’ny filalaovana sarimihetsika koa anefa izy. Teo indrindra no nahitan’i Georges Lucas mpamokatra sarimihetsika azy, ary dia lasa isan’ireo malaza indrindra amin’ny mpilalao sarimihetsika izy, amin’izao fotoana.
3. Sendra nanontany lalana tamin’olona i Will Smith, tamin’izany, fa very. Ny filoha lefitry ny “Warner Bros”, izay mpamokatra horonan-tsary anefa io nanontaniany io, ka lasa teo ny resaka. Tamin’izany fotoana izy dia mbola mpitendry zava-maneno.
4. Nisy lozam-piara-manidina nahazo an’i Clint Eastwood, nefa velona soa aman-tsara izy, taorian’izany. Nasain’ny fahitalavitra izy mba hijoro vavolombelona, ka nanaitra avy hatrany ny mpamokatra horonan-tsary ny tarehiny, ary dia izy niroboka tanteraka tao anatin’ny tontolon’ny sarimihetsika.